Ndị a bụ akụkọ kachasị mkpa nke gam akporo 10 | Gam akporosis
Ozi kachasị mma nke gam akporo 10
Android 10 dị ebe a, ma ọ dịkarịa ala maka pikselụ na ụdị ndị ọzọ, nwere ọtụtụ akwụkwọ akụkọ dị mkpa yana anyị na-eche ụdị ọhụụ a nke na-ahapụ, na aha ebighi ebi.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị ọ ga-ewe oge iji weta gam akporo 10, echegbula usoro a na akwụkwọ ahụ aja ma si otú ejiji na desktọọpụ. Versiondị 10 nke na-abịa na isi atụmatụ na nke ahụ, maka ndị furu efu, anyị ga-egosi gị.
1 Live Caption ma ọ bụ ndepụta okwu na ozugbo
2 Nzaghachi Smart ma ọ bụ Nzaghachi Smart
3 Nkwalite ụda ma ọ bụ Nkwalite ụda
4 Ngagharị Ngagharị
5 Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị
6 Nche na nzuzo na-abawanye mkpa
7 Nweta mmelite ngwa ngwa
8 Ọnọdụ mgbado ụkwụ
9 Njikọ Ezinụlọ
Live Caption ma ọ bụ ndepụta okwu na ozugbo
Ihe ọhụrụ a nke gam akporo 10 na-enye ohere iji otu pịa malite na-akpaghị aka sobtaitel vidiyo, pọdkastị na ozi ederede na-enweghị mkpa WiFi ma ọ bụ data. Ọrụ gam akporo a na-achọ ịmata ihe na-atọ ụtọ nke ga-eweta ahịrị dị mma maka ndị na-ebugote ọdịnaya multimedia na netwọkụ mmekọrịta ha.
Nzaghachi Smart ma ọ bụ Nzaghachi Smart
Oge a Google ọgụgụ isi na-arụ ọrụ zuru oke na nzaghachi ya. Ọ bụrụ na enyi gị ezitere gị ozi na-arịọ ka ị gaa nri abalị, njirimara a ga-egosi ụzọ mkpirisi iji "chọọ" na ikike imeghe maapụ iji chọta ọnọdụ ma kesaa ya ozugbo.
Nkwalite ụda ma ọ bụ Nkwalite ụda
Njirimara a na-enyere aka ntị. Ihe ụda ampilifaya na-eme bụ ịkwalite ụda ahụMa ọ bụ, iyo ụda ndabere ma mezie ihe ị nụrụ ka ị nweta ahụmịhe kachasị mma. Ngwa a dịịrị mmadụ niile ugbu a, ma ihe e kwuru, kwadoro maka ndị nwere nsogbu ịnụ ihe:
Ugbu a, ị nwere ike ịgagharị na desktọọpụ na ngwa ndị kachasị amasị gị na mmegharị ọhụụ ndị ahụ kensinammuo na ngwa ngwa. Nwere ike ịlaghachi azụ ma ọ bụ gaa ihu, wedata ogwe ngosi ma ọ bụ gbagoo iji hụ ngwa ghere oghe. Ihe niile na-eji ire ụtọ na ahụmịhe kachasị mma enyere.
Otu n'ime akụkọ kachasị atụ anya maka onye ọ bụla bụ isiokwu gbara ọchịchịrị nke na-abịa na gam akporo. Ebumnuche, dịka Samsung mere n'oge ya na ihu ọhụụ AMOLED, bụ nke ahụ iji ezi oji na-edebe batrị ruo ogologo oge; do gaghị agbaghara a video nke anyị na-atụnyere ọkọlọtọ Samsung abụọ nke afọ.
Nche na nzuzo na-abawanye mkpa
Ugbu a, anyị nwere njikwa anyị nwere na-enye anyị ohere kpebie otu esi aga data na ọdụ anyị na-akọrọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ngwa nke anyị na-anaghị ebido na-abanyekarị na data data, a ga-ajụ anyị maka ikike ịme ya. Ma ọ bụghị ya, anyị nwere ike ịkwụsị ụkwụ ya.
Ga-enwe ike ịchọta na ịhazigharị ihe niile ntọala nzuzo n'otu ebe, kpebie ihe data ahụ bụ na ogologo oge a ga-echekwa ya, chịkwaa mgbe ekesara ebe gị na ngwa gị wee kpochapụ kuki gị site na ịchigharị mgbasa ozi.
Nweta mmelite ngwa ngwa
Google Play system mmelite na nchedo na ihe nzuzo zoro ezo ugbu a na ekwentị gị site na Google Play, dị ka ngwa ndị ọzọ na-emelite.
Ọnọdụ mgbado ụkwụ
Can nwere ike hazie Focus Mode ma ọ bụ Elekwasị anya site na ọnọdụ na-egbochi ndị ngwa nke ahụ na-adọpụ gị uche. Ọnọdụ a dị ugbu a na beta ma na-enye gị ohere ịhọrọ ngwa iji kwụsị nwa oge. Yabụ ị nwere ike iwepụ ihe ndọpụ uche site na iji pịa dị mfe iji lekwasị anya na ọrụ ma ọ bụ ọmụmụ gị.
Modekpụrụ a bụ dị na Digital Wellbeing na pikselụ, n'ihi ya ị nwere ike ịnwale ya ilekwasị anya na ntinye ị na-anọghị n'ịntanetị ma si otú a ghara ịda ule ma ọ bụ belata arụmọrụ gị.
Google na-enweta Kpochie na Nzuzo na Nchedo Nche. Otu ihe a na - eme n’ezinaụlọ ahụ ị ga - elekọta anya ma na ekwentị ndị a emeela ka mmekọrịta ka njọ na ya.
Jiri Family Link ị nwere ike itinye iwu dijitalụ ma si otú ahụ nyere ezinụlọ gị aka inwe ezigbo ahụ ike. Nwere ike ịtọ oke oge ihuenyo, lee ọrụ nke ngwa ahụ, jikwaa ha ma mee mmachi ọdịnaya ma hụ ebe ha dị.
una usoro nke ohuru nke gam akporo 10 nke na-ewetara ha ezigbo ihe omuma iji mee ka mgbanwe ndị ahụ dakwasị ndụ anyị kwa ụbọchị ka mma. Ugbu a, anyị ga-echere maka ụdị ụfọdụ iji melite, ọ bụ ezie na ụfọdụ emeela ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ozi kachasị mma nke gam akporo 10
Nkwanye 20s: Uzo ohuru ohuru nke ika ahu